China Siri ike osisi sideboard mfe nchekwa kabinet na otu ọnụ ụzọ na anọ na úkwù # 0105 rụpụta na Factory | Yamazonhome
Osisi siri ike ogwe osisi dị mfe nke nwere ọnụ ụzọ na draịva anọ # 0105
Aha: Ogwe akụkụ
Nọmba nlereanya: Amac-0105
Nha: 900mm * 400mm * 800mm
Centennial Oak ụba
Isi ihe bụ FAS-ọkwa ọcha oak si North America. Osisi siri ike, ya na ederede doro anya na ezigbo gloss. Mgbe emechara nlezianya, njirimara nke osisi n'onwe ya na-ejigide ya na oke, nke bụ onyinye sitere n'okike. A haziri usoro ihe eji eme ugwu mara mma nke ọma, Ogwe dị n'ime drawer ahụ bụ nke osisi paulownia nwere oke ike, nke siri ike ma dịgide.
Otu ọnụ ụzọ ime ụlọ draịva anọ
A haziri ndị na-ese ihe na nha ahaghị nhata, juputara na nka na-adịghị agbanwe agbanwe, yana nwekwara ike izute mkpa ohere nchekwa dị iche iche. A gbanwere ogo nke kabinet mgbe ọtụtụ ọnwụnwa gasịrị, ọ ga-adị oke aka ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọdụ na nsọtụ ihe ndina ịhọrọ uwe. Enyere gị aka ịhazi ụfọdụ mgbanwe ugboro ugboro Ọrụ nke ojiji, drawer mechiri emechi nwere ike inye gị ohere zuru oke.
Osisi siri ike ụgbọ okporo ígwè + usoro nkwonkwo ụkwụ
Osisi ihe eji esere ihe nkiri na-adịgide adịgide. Iji hụ na nchekwa dị n'iji, anyị emeela mgbochi mgbochi ọ bụla maka drawer ọ bụla, yabụ ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị gbasara ihe egwu dị na ịdọpụ ndị na-adọpụta ya. Mfe na-eji ire ụtọ akara, dị nnọọ mma size imewe, Nwere ike na-akwado ndị bụ isi ịke nke ndụ ohere.
Otu-osisi siri ike osisi kabinet ụkwụ
Okpokoro osisi siri ike na nke na-enweghị mmịcha na ejiji na-eguzogide ala nwere ike ichebe ala ma gbatịkwuo ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ala adịghị emetụ ala aka iji zere mmiri ma ọ dị mma ka ị hichaa ma lekọta ya. Ọdịdị ụkwụ otu ụkwụ, nkwụsi ike kwụsie ike.
Elu akwa ngwaike ọnụ ọnụ + iko kabinet ụzọ
The uzo iko kabinet ụzọ bụ dakọtara na nchekwa na ngosi. A na-etinye obere karama mmanya dị mma na ihe osise ole na ole n'ime ya, nke mara mma ma na-emesapụ aka. A na-etinye windo azụ iji nyochaa ikuku dị n'ime, na-egbochi mmiri na mgbochi na-agwụ ike. Elu-edu ngwaike ụzọ adabere, Easy imeghe, enweghị mkpọtụ, adịghị mfe nchara.
Nnukwu ebe nchekwa drawer
A na-ejikọ osisi osisi siri ike na eserese eserese, ịmị na ịdọrọ bụ ndị ogbi, na-echekwa ohere, ma na-eme ka ọdịdị ahụ dị mfe. Ejiri ngwaọrụ nke nchekwa maka igbe nke drọsị iji gbochie mkpofu nke kọfị na mberede, iji kpuchido ahụike nke ndị ezinụlọ, nchekwa nke ụmụaka, na ndị nne na nna.
Nke gara aga: Otu Door Anọ Ndọ Akụ Side Cabinet Simple Sofa Side Cabinet Nchekwa Cabinet # 0104
Osote: Ọzụzụ ụgbọ elu Taekwondo Air Matara Inflatable Air Tumble Tracks 0381
Sup Surfboard Brush Kwuru Guzosie Padle Board 0370
All Solid Wood Igbe nke Drawers Living Room Bed ...
Nordic Single Solid Wood ụba Sofa Creative Fu ...
Ezinaụlọ Desk Simple Computer Desk Nchikota ...